ER Collets ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသတ်မှတ်ရန်တရုတ် ER Collet သတ်မှတ်မည်, နွေဦး Collet သတ်မှတ်မည်, နွေဦး Collets သတ်မှတ်ပေးသည်,
Home > ထုတ်ကုန်များ > နွေဦး ColletsER Collets သတ်မှတ်မည်
ER Collets သတ်မှတ်မည် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ER Collet သတ်မှတ်မည်, နွေဦး Collet သတ်မှတ်မည် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, နွေဦး Collets သတ်မှတ်ပေးသည် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ပလတ်စတစ် Box ကိုအတူမြင့်မားသော Precision ER Collets သတ်မှတ်မည်
ER Collets ER40 နွေ Collets သတ်မှတ်ပေးသည်သတ်မှတ်ရန်
ER စီးရီးနွေ Collets Wood ကထောင့်ကွက်သတ်မှတ်မည်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 49 - 49.5 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 5000set /MONTH
ပလတ်စတစ် Box ကိုအတူမြင့်မားသော Precision ER Collets သတ်မှတ်မည် 1. DIN6499B 2. 65 MN သို့မဟုတ် 45 # သံမဏိ 0.005mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision; 0.008mm သို့မဟုတ် 0.015mm 4. HRC: 44-48 5. အမြင့်အကြမ်းခံ တူးဖော်ခြင်း, ကြိတ်, နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်အပါအဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးများအတွက် 6. အသုံးချ အဓိကအားဖြင့်...
ER25 မက်ထရစ်မြင့်မားသောတိကျ er collet set ကို 1) ကျွန်ုပ်တို့၏ ER collet ၏ Runout 0.005mm-0.015mmm အတွင်းများမှာ 2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 နှင့် ER50 collet 3) အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖန်ဆင်း: 65Mn 4) Pack: အတွင်းစိတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်စက္ကူသေတ္တာဖြစ်ပါသည်, ပြင်ထုပ်ပိုးပုံးဖြစ်ပါတယ်။...
အမှတ်တံဆိပ်: TOOL TREE
ထုပ်ပိုး: plastic box;wood box;
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1.85 -2/ Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: 10000pcs /month
0.015mm ER32 နွေဦး collets ကြိတ် Chuck အဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတူးဖော်စက်များ, ကြိတ်စက်များနှင့်တွင်ခုံများအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဆလင်ဒါဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို, ကိုင်ပြီးအဘို့အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ 1. DIN6499B ER Collets 2. 65Mn ER Collets; HRC: 44-48 0,008 သို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက် 0.015mm...
တရုတ်နိုင်ငံ ER Collets သတ်မှတ်မည် ပေးသွင်း
လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ ER COLLET သတ်မှတ်မည်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ထုတ်လုပ်သူများယုံကြည်မှုအများစုအားဖြင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု။ အားလုံးထုတ်ကုန်ဂျာမန် Din 6499 သတ်မှတ်ချက်များတိကျကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အညီ, တိကျကြိတ်ဖြစ်ကြသည်။
1. ပစ္စည်း: 65Mn အလွိုင်းနွေဦးကိုသံမဏိ
2. ခွန်အား: HRC45-48
3. နျ Standard: Din 6499B
4. အာရုံစူးစိုက်မှု: ထက်လျော့နည်း 0,008 မီလီမီတာ runout
5. လစဉ်စွမ်းရည်: 30000 PCs
ကြိတ် Chuck အဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတူးဖော်စက်များ, ကြိတ်စက်များနှင့်တွင်ခုံများအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဆလင်ဒါဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို, ကိုင်ပြီးအဘို့အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။
2. အပြည့်အဝတောက်တောက်အသွင်အပြင်, ကောင်းသော elasticity
တာရှည်ခံခြင်းနှင့်မလှယျကူ 3. တိတည်ငြိမ်မှု,
4. တိကျပြတ်သားမှု: 65 သန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုလက်ကိုင်ထား, မြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိသည်။
ER Collet သတ်မှတ်မည်
နွေဦး Collet သတ်မှတ်မည်
နွေဦး Collets သတ်မှတ်ပေးသည်
ER Collets သတ်မှတ်ပေးသည်